लाजरस, बाहिर आउनुहोस्! , विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
हामी धेरैजसोलाई यो कथा थाहा छ: येशूले लाजरसलाई मृत्युबाट बिउँताउनुभयो। यो एक आश्चर्यजनक चमत्कार थियो जसले येशुले पनि हामीलाई मृत्युबाट बिउँताउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउनुभयो। तर कथाले अधिक समावेश गर्दछ, र जोहान्सले केहि विवरणहरू समावेश गर्दछ जुन आज हाम्रो लागि गहिरो अर्थ हुन सक्छ। म प्रार्थना गर्छु कि यदि मैले तपाईका केही विचारहरू तपाईसँग बाँडें भने, मैले इतिहासलाई अन्याय गरेको छैन।
आउनुहोस्, यूहन्नाले यो कथा बताउने तरिकालाई हामी ध्यान देऔं: लाजरस यहूदियाका बासिन्दाहरू थिएनन् - उनी मार्था र मारियाका भाइ थिए, मरियम जसलाई येशूले यति माया गर्नुहुन्थ्यो कि उनले उहाँको खुट्टामा बहुमूल्य अभिषेक तेल खन्याइदिनुभयो। ती बहिनीहरूले येशूलाई बोलाए: "प्रभु, हेर्नुहोस् जसलाई तपाई माया गर्नुहुन्छ बिरामी छ।" (यूहन्ना .11,1..3-) मेरो लागी, यो मद्दतको लागि कराएको जस्तो लाग्छ, तर येशू आउनुभएन।
के तपाईंलाई कहिलेकाहीँ भगवानले आफ्नो उत्तर ढिलाइ गरिरहेको जस्तो लाग्छ? यो पक्कै मरियम र मार्थालाई भयो, तर ढिलाइको मतलब येशू हामीलाई मन पर्नुहुन्न भन्ने होइन। बरु, यसको अर्थ त्यो हो कि उसको दिमागमा अर्को योजना छ किनकि उसले केहि देख्न सक्छ जुन हामी देख्दैनौं। जब देखिन्छ, ती सन्देशवाहकहरू येशू कहाँ पुग्दा लाजरसको मृत्यु भइसकेको थियो। ऊ गलत थियो? होईन, किनकि येशूले मृत्युलाई पछाडि देख्न सक्नुहुन्थ्यो र यस अवस्थामा उसलाई मृत्युको कथाको अन्त्य हुनेछैन भनेर थाहा थियो। उसलाई थाहा थियो कि परमेश्वर र उनको छोराको महिमा गर्नु थियो (V. 4) यद्यपि, उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई लाजरस मर्नेछैन भनेर सोच्न लगाउनुभयो। यहाँ हाम्रोलागि पाठ पनि छ, किनकि हामी सँधै बुझ्दैनौं कि येशू वास्तवमा के भन्न खोज्नुहुन्छ।
दुई दिन पछि, येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई यहूदियामा फर्कने सल्लाह दिएर छक्क पार्नुभयो। येशू किन खतराको क्षेत्रमा फर्कन चाहानुहुन्छ भनेर उनीहरूले बुझेनन्, त्यसैले येशूले उज्यालोमा हिंड्ने र अँध्यारोको शुरुआतको बारेमा एउटा अलमल्लमा पार्नुभयो। (V. 9-10) त्यसपछि उनले तिनीहरूलाई लाजरसलाई उठाउन जानु पर्ने कुरा बताए।
येशूका केही टिप्पणीहरूको रहस्यमय प्रकृतिमा चेलाहरू प्रयोग भएको देखा पर्‍यो र अधिक जानकारी प्राप्त गर्न डु a्गा भेट्टाउनुभयो। तिनीहरूले औंल्याए कि शाब्दिक अर्थले कुनै अर्थ राख्दैन। यदि ऊ निदाउँछ, ऊ आफैंमा उठ्छ, त्यसोभए हामीले त्यहाँ किन आफ्नो ज्यान जोखिममा लिनुपर्दछ?
येशूले घोषणा गर्नुभयो: "लाजरसको मृत्यु भयो" (V. 14) तर उनले यो पनि भने: "मलाई खुशी छ कि म त्यहाँ छैन।" किन? "त्यसोभए तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ" (V. 15) येशूले एउटा चमत्कार गर्नुभयो जुन एक बिरामी मानिसको मृत्युलाई मात्र रोक्ने थियो भने त्यो भन्दा अचम्मको कुरा हुनेछ। तर चमत्कार भनेको लाजरसलाई फेरि जीवित पार्नु मात्र थिएन - यो पनि हो कि येशूलाई knew० किलोमिटर टाढा के भइरहेको थियो र निकट भविष्यमा उसलाई के हुनेवाला थियो भनेर पनि थाहा थियो।
उहाँसँग ज्योति थियो जुन उनीहरूले देख्न सक्दैनन् - र यो ज्योतिले यहूदियामा उनको आफ्नै मृत्यु - र उसको पुनरुत्थान प्रकट गर्‍यो। उहाँ घटनाहरूको पूर्ण नियन्त्रणमा हुनुहुन्थ्यो। उसले चाहेको खण्डमा उनले क्याप्चर रोक्न सक्छ; उनले एक शब्दमा परीक्षण रोक्न सक्थे, तर उनले गरेनन्। उसले पृथ्वीमा आएर के गर्ने निर्णय गरे।
जो मानिस मरेकाहरूलाई जीवित पार्दछ उसले आफैंलाई आफ्नो जीवन मानिसमा दिनेछ किनभने ऊसित मृत्युमा र आफ्नै मृत्युमाथि पनि अधिकार छ। उहाँ यस पृथ्वीमा मर्नु भयो कि उहाँ मर्नुभयो, र सतही अवलोकनमा त्रासदी जस्तो देखिने कुरा वास्तवमा हाम्रो मुक्तिको लागि हो। म यो तर्क गर्न चाहन्न कि प्रत्येक दुःखद घटना वास्तवमा परमेश्वरद्वारा योजना गरिएको वा राम्रो हो, तर म विश्वास गर्दछु कि परमेश्वर खराब चीजहरूबाट राम्रो गर्न सक्षम हुनुहुन्छ र उहाँ वास्तविकतालाई देख्नुहुन्छ जुन हामी गर्न सक्दैनौं।
उहाँ मृत्युको पछाडि हेर्नुहुन्छ र घटनाहरू नियन्त्रण गर्नुहुन्छ आज भन्दा कम - तर यो हाम्रो लागि प्रायजसो अदृश्य छ जुन यूहन्ना ११ मा चेलाहरूको लागि थियो। हामी केवल ठुलो तस्वीर देख्न सक्दैनौं र कहिलेकाँहि अँध्यारोमा हामी लडिरहेका हुन्छौं। हामीले परमेश्वरमा विश्वास गर्नुपर्दछ उहाँलाई उत्तम कुरा सोच्ने तरिकाले गर्न। कहिलेकाँही हामी अन्त्यमा कसरी चीजहरू अझ राम्रोसँग काम गर्दछन् भनेर हेर्न सक्दछौं, तर प्राय: हामीले यसको लागि उहाँको वचन लिनुपर्दछ।
येशू र उहाँका चेलाहरू बेथानीमा जानुभयो र लाजरस चिहानमा चार दिन भइसकेको खबर पाए। अन्त्येष्टि भाषणहरू गरिएको थियो र अन्त्येष्टि लामो थियो - र अन्तमा डाक्टर आउँछन्! मार्थाले भने, "थोरै नैराश्य र चोटले:" प्रभु, यदि तपाईं यहाँ हुनुभएको भए, मेरो भाइ मर्ने थिएन " (V. 21) हामीले तपाईंलाई केहि दिन अघि बोलाएका थियौं र यदि तपाईं आउनुभएको भए लाजरस अझै बाँच्ने थिए। तर मार्थाको आशाको किरण थियो - थोरै उज्यालो: "तर अहिले पनि मलाई थाहा छ: तपाईले भगवान्‌बाट के बिन्ती गर्नुभयो कि हामी तपाईलाई भगवान दिन्छौं"। (V. 22) हुनसक्छ उनले सोचेकी थिइन कि पुनरुत्थानको लागि सोध्नु थोरै साहसी भए, तर उनले केहि सुझाव दिन्छिन। "लाजरस फेरि जीवित हुनेछन्," येशू र मार्थाले जवाफ दिए: "मलाई थाहा छ कि उनको पुनरुत्थान हुन्छ" (तर मैले केहि अलि चाँडो आशा गरेको थिएँ)। येशूले भन्नुभयो, "यो राम्रो छ, तर के तपाईंलाई थाहा छ म पुनरुत्थान र जीवन हुँ?" यदि तपाईं ममाथि विश्वास गर्नुहुन्छ भने तिनीहरू कहिल्यै मर्ने छैनन्। के तपाईंलाई त्यस्तै लाग्छ? » मार्थाले त्यसपछि सम्पूर्ण बाइबलको विश्वासको एउटा उल्लेखनीय भनाइमा यसो भने: "हो, म विश्वास गर्छु। तपाईं पनि परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ" (V. 27)
जीवन र पुनरुत्थान केवल ख्रीष्टमा मात्र पाउन सकिन्छ - तर के येशूले आज येशूले भन्नुभएको कुरालाई विश्वास गर्न सक्छौं? के हामी वास्तवमै विश्वास गर्दछौं कि "जो त्यहाँ बस्छ र ममाथि विश्वास गर्दछ ऊ कहिल्यै मर्नेछैन।" म आशा गर्दछु कि हामी सबैले यसलाई अझ राम्ररी बुझ्न सक्दछौं, तर मलाई थाहा छ कि पुनरुत्थानमा हामीसँग यस्तो जीवन हुनेछ जुन कहिल्यै अन्त हुँदैन।
यस युगमा हामी सबै मर्दछौं, जस्तै लाजरस र येशू "हामीलाई खडा पार्नुपर्नेछ।" हामी मर्छौं, तर हाम्रो लागि यो कथाको अन्त होइन, जसरी यो लाजरसको कथाको अन्त्य थिएन। मार्था मारिया लिन गइन् र मरियम येशूकहाँ आईन्। येशू पनि रुनुभयो। लाजरस फेरि बाँच्नेछ भनेर उसलाई पहिल्यै थाहा भइसकेपछि ऊ किन रोयो? यूहन्ना "आनन्दको कुनातिर नै" रहेछन् भनेर जब यूहन्नाले थाहा पाए तब उनले किन यो लेखे? मलाई थाहा छैन - म सधैँ मलाई थाहा छैन किन म रोइरहेको छु, खुशीका अवसरहरूमा पनि।
तर मलाई लाग्छ त्यो कथन छ कि अन्त्येष्टिमा रुनु ठीक छ, हामीलाई थाहा छ कि त्यो व्यक्ति अमर जीवनमा उठाइनेछ। येशूले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि हामी कहिल्यै मर्नेछैनौं, र अझै मृत्यु छ।
उहाँ अझै शत्रु हुनुहुन्छ, यस संसारमा मृत्यु अझै पनि त्यस्तो चीज हो जुन अनन्तसम्म हुँदैन। यदि अनन्त आनन्द "कुनाको चारैतिर" भएता पनि हामी कहिलेकाँही गहिरा उदासिनताको समयको अनुभव गर्दछौं, यदि येशूले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने पनि। जब हामी रुन्छौं, येशू हामीसँग रोउनुहुन्छ। उहिले हाम्रो उदासिनता यस युगमा देख्न सक्छ, जस्तै उसले भविष्यका सुखहरू पनि देख्न सक्छ।
येशूले भन्नुभयो, “ढु the्गा हटाऊ र मरियमले उहाँलाई समातिन्:" त्यहाँ गन्ध आउँनेछ किनभने ऊ मरेको चार दिन भइसक्यो। "
के तपाईंको जीवनमा के यस्तो दुर्गन्ध छ, के हामीले येशूको पर्दाफाश गरेको चाहँदैनौं "ढु the्गा हटाएर?" सम्भवतः सबैको जीवनमा यस्तै केही कुरा छ जुन हामी सायद लुकाइराख्दछौं, तर कहिलेकाँही येशूसँग अन्य योजनाहरू पनि हुन्छन् किनकि हामीलाई नजान्ने चीजहरूका बारे उसलाई थाँहा हुन्छ र हामीले उसलाई विश्वास गर्नुपर्दछ। तब तिनीहरूले ढु the्गा हटाए र येशूले प्रार्थना गर्नुभयो र त्यसपछि कराउनुभयो: "लाजरस, बाहिर आऊ!" "र मृतक बाहिर आए," जोहान्स रिपोर्ट गर्छन् - तर ऊ वास्तवमै मरेन। ऊ मरेको मान्छे जस्तो कफनमा बाँधिएको थियो तर ऊ गयो। "उसलाई फुकाइदेओ," येशूले भन्‍नुभयो, "र उहाँलाई जान दिनुहोस्!" (V. 43-44)
येशूको बोलावट आज आध्यात्मिक तवरमा मरेकाहरूलाई पनि जान्छ र कोही-कोहीले उनको सोर सुन्छन् र चिहानबाट निस्किन्छन् - तिनीहरू दुर्गन्धबाट बाहिर आउँछन्, तिनीहरू स्वार्थी मानसिकताबाट निस्किन्छन् जसले मृत्युतिर डोर्याउँछन्। र तपाईंलाई के चाहिन्छ? तपाइँलाई कोही चाहिन्छ तपाइँलाई आफ्नो कफन हटाउनका लागि, पुरानो सोच्ने तरिकाहरूबाट छुटकारा पाउनुहोस् जुन हामीलाई सजिलो छ। त्यो चर्चको कार्य हो। हामी मानिसहरूलाई ढु the्गा हटाउन मद्दत गर्दछौं, त्यहाँ कुनै प्रकारको दुर्गन्ध भएता पनि, र हामी मानिसहरूलाई येशूको सहायताको लागि सहयोग गर्ने मानिसहरूलाई सहयोग गर्दछौं।
के तपाईं उहाँकहाँ आउन येशूको आह्वान सुन्नुहुन्छ? यो तपाइँको "चिहान" बाट बाहिर निस्किने समय हो। के तपाईंलाई कसैले येशू बोलाएको चिन्नुहुन्छ? यो समय उनीहरूलाई ढु stone्गा हटाउन मद्दत गर्ने समय हो। यो सोच्न को लागी कुरा हो।